Torohevitra lehibe avy amin'ny Expert Expert amin'ny sehatry ny fako
Maro ny tranonkala manana data vaovao, ary mila fantarin'ireo mpikaroka ny tranonkala zavatra sasantsasany mba hahafantarana ny fomba famonosana tanteraka ny fanasitranana. Betsaka ny raharaham-barotra mampiasa tranon-tsolika mba hahazoana banky be dia be amin'ny angona azo itokisana. Na dia manana rafitra fiarovana aza ny ankamaroan'ny tranonkala dia ny ankamaroan'ny navigateurs dia manome fitaovana tsara ho an'ireo mpampiasa. Ireto manaraka ireto misy toro-hevitra sasantsasany ho an'ny mpikaroka web izay te-hanangona angona avy amin'ny tranonkala samihafa tsotra sy haingana.
Ny zavatra manan-danja indrindra amin'ny tranokalan'ny tranonkala dia ny mahita ny fitaovana mety rehetra hanombohana ny tranokala. Ohatra, afaka manomboka amin'ny fampiasana amin'ny tranokala vohikala an-tserasera izay afaka manampy azy ireo hanao ilay asa. Raha ny marina dia maro ireo fitaovana amin'ny aterineto amin'ity asa ity. Rehefa manangona tranonkala izy ireo, dia mila mamaham-peo ny antontan-taratasiny izay nalefany. Vokatr'izany dia afaka mitazona lisitra maromaro amin'ireo URL misy pejy voasakana izy ireo. Ohatra, mila manamboatra latabatra isan-karazany ao anaty tahirin-tsakafo ny tranokala hananganana ireo antontan-taratasy kopia..Amin'ny ankapobeny, ny tranonkala dia manamboatra rakitra samihafa mba hamahanana ny angon-drakitra rehetra ao amin'ny ordinaterany, mba hamakafakana azy ireo taty aoriana.
Mamolavola Spider mba hanapatapaka tranonkala maro
Ny spider dia fandaharanasam-pamokarana manokana mandeha amin'ny alalan'ny tranonkala isan-karazany mba hahitana ny data mifanaraka amin'izany. Afaka mahita fampahalalana marobe izay voatahiry ao amin'ny pejy samihafa manerana ny aterineto. Amin'ny fananganana sy fihazonana spider (na bot), dia midika izany fa afaka manaparitaka ny hevitry ny web amin'ny fomba hafa. Ny aterineto dia toerana goavana, izay tsy tokony hampiasana azy hamaky ireo lahatsoratra sy hikaroka fampahalalana ankapobeny ao amin'ny sehatra media sosialy na fitsidihana e-shops. Fa afaka mampiasa izany ho tombontsoany manokana izany. Toerana goavana izy io, izay ahafahan'izy ireo mampiasa fandaharan'asa isan-karazany mba hananganana zavatra izay hanampy azy ireo handroso sy hanatsarana ny zava-bitan'ny orinasa.
Raha ny marina, ny spider dia afaka mamaky pejy ary manaisotra sy manoratra tahirin-kevitra. Vokatr'izany, ireo mpikaroka web dia afaka mampiasa ireo rafitra rehetra natolotra izay afaka manosika haingana ny haingam-pandeha haingana. Izy ireo dia mila manitsy ny zana-tohatra amin'ny haingam-pandeha sasany. Ohatra, izy ireo dia afaka mamorona spider izay mipetaka amin'ny toerana sasany ary manao zavatra toy ny mpampiasa matetika. Ankoatra izany, ny spider dia afaka mahita ny angon-drakitra amin'ny fampiasana API ihany koa ary noho izany dia afaka manao asa samihafa rehefa miditra amin'ny tranonkala hafa. Ireo mpikaroka ao amin'ny tranonkala dia mila mahatsiaro fa ny paikadiny dia tsy maintsy manova ny mombamomba azy izay mikoriana ao amin'ny tranonkala samihafa.